Muddada la isticmaalayo shanta baddel, qaabka iyo waqtiyada gaarka ah ee la oggolyahay iyo xeerarka ku xeen daaban baddellada… (Shanta baddel oo la ansixiyay iyo VAR oo meel la iska dhigay) – Gool FM
(Zürich) 08 Maaajo 2020. Iyadoo la rajeynayo in kubadda cagta dib loo ciyaaro maaddaama dunida ay ka soo kabaneyso musiibadii caafimaad ee faafaha coronavirus, hay’adda International Football Association Board (The IFAB) ayaa ansixisay in si ku meel gaar ah wax looga baddelo xeerarka ciyaarta kaddib dalabkii kaga yimid FIFA ee la xiriiray dhowridda bad-qabka ciyaartoyda.
Tartamada dib loo billaabay iyo kuwa u qorsheysan in la billaabo illaa laga gaaro 31-ka Diseembar 2020 ayaa ka faa’ideysan doona oggolaanshaha IFAB ay ku aqbashay soo jeedintii FIFA ee ahayd in xeerka saddexaad (xeerka baddellada) si ku meel gaar ah wax looga baddelo, isla markaasna kooxaha kubadda cagta loo oggolaado inay isticmaali karaan ugu badnaan shan baddel ciyaartiiba.
Balse si looga digtoonaado in waqti badan uu ku lumo baddelada, koox walba waxaa loo oggolahay kaliya saddex jeer inay baddel sameyn karaan, sidoo kalena xilliga nasiinnada ay sameyn karaan baddel.
In xeerka baddellada si ku meel gaar ah wax loogaga baddelo waxaa sabab u ah waqtiga yar iyo kulammada badan ee la qorsheynayo in la ciyaaro, iyadoo cimillada dalka oo kala duwanna ay qayb ka yihiin sababaha xeerkan wax looga farsameynayo.
Go’aanka ah in dib u qaabeynta xeerka baddellada uu sii jiri doono ayaa noqonaya dood aan wali go’aan laga gaarin, halka IFAB iyo FIFA ay go’aamin doonaan in loo sii isticmaalo tartammada dhammaan doona 2021.
Wax ka baddelka Xeerka Saddexaad ayaa saammeyn doona xilli ciyaareedyada 2019/20 iyo 2020/21, iyadoo fasal ciyaareedka soo socda uu ka billaaban doono dabayaaqada sanadkan ama wixii ka dambeeya 1 June 2020.
Tartammadii loo isticmaali jiray aaladda muuqaal caawiyaha garsoorka ee VAR ayaa loo fasaxay inay joojin karaan si looga taxaddaro dadka ku shaqada ku leh.
Si kastaba ha ahaate, halka VAR loo isticmaalo, dhammaan dhinacyada sharciyada Ciyaaraha iyo, kordhinta nidaamka borotokoolka VAR wuu sii jiri doonaa.
Qaabka baddellada oo kooban iyo xeerarkiisa oo kooban.
Koox walba waxaa loo oggol yahay inay isticmaali karto ugu badnaan shan baddel.
Si loo yareeyo in ciyaarta ay carqalad gasho, koox walba waxay heysataa ugu badnaan saddex fursadood oo ay baddel ku sameyn karto inta ciyaarta ay socoto, sidoo kale baddelka xilliga nasiinnada waa la oggol yahay.
Haddii labada koox ay halmar baddelka wada sameynayaan, koox walba waxaa loo xisaabin doonaa hal ka mid ah fursadaheeda.
Baddellada aanan la isticmaalin iyo fursadaha baaqiga ah waa loo isticmaali karaa haddii ciyaarta ay yeelato waqti dheerri ah.
Halka xeerka kubadda cagta uu ka oggol yahay in baddel dheerraad ah la isticmaali karo waqtiga dheerriga ah, kooxaha waxay heli doonaan hal baddel iyo hal fursad oo dheerri ah, iyadoo baddelkaas la sameyn karo billawga waqtiga dheerriga ah ama bartamihiisa.
Xiddig baddel ku baxay inuu soo laabto waa ka mamnuuc ciyaaraha heerka sare.